သငျသညျ ODNOKLASSNIKI အတွက်ပေးပို့သူပစ္စုပ္ပန်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘယ်လိုသိသလဲ - အတန်းဖော် - 2019
ဒါဟာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်သို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာထိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်သော့ခတ်ဖိုင်စေ, ပစ္စည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသောလျှောက်လွှာကိုပိတ်လိုက်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မနှစ်မြို့ဖွယ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ခြင်း - သင်ကဖိုင်ကိုဖယ်ရှားပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်ကူးယူလို့မရပါဘူး။
အခမဲ့ File Unlocker - ဤသည် non-ဖြုတ် element တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်ကသင်နှင့်အတူ, သော့ခတ်ဖယ်ရှားဖိုင်ကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။
Lock ကို Hunter - ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားဖြင့်အခမဲ့ File Unlocker နီးပါးဤလျှောက်လွှာကိုမိတ္တူဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ File Unlocker ၏အားသာချက် installation ကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့အိတ်ဆောင်ဗားရှင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာဖို့ဖိုင်ကိုဇီပ်ကလောက်။
application များအခမဲ့ File Unlocker အားဖြင့်သင်တို့ကိုသော့ချထားသောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလည်းသော့ချထားသောဖိုင်တွဲများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာ window တွင်လုပ်ငန်းစဉ်ဒြပ်စင်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုမထားဘူးသည့်သတင်းအချက်အလက်, ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကရုတ်တရက်ပိတ်ဆို့များ၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးသည်: အထူးအစီအစဉ်ကိုသင့် hard drive ပေါ်တွင်ဖိုင်ကိုနှင့်၎င်း၏တည်နေရာသော့ခတ်သောအရာကို။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာဖိုင်ကိုမဖျက်ပစ်မရှိဘဲပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဖြစ်နိုင်ရွှေ့ copy, နှင့်အမည်အားပြောင်းလဲ။ ဒါ့အပြင်သင်ဖိုင်ကိုသော့ခတ်ဖို့ဦးဆောင်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ပါ။
1. လျှောက်လွှာ၏ user-ဖော်ရွေ interface ကို;
3. installation ကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့အိတ်ဆောင်ဗားရှင်းရှိပါတယ်။
1. Russian သို့ no translation ။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော "file ကိုအခြားပရိုဂရမ်၌ဖွင့်" "Access ကိုငြင်းဆို" သို့မဟုတ်အဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူပျင်းများမှာလျှင်, အခမဲ့ File Unlocker ထားကြ၏။ ဒါဟာသင် undelete ဒြပ်စင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အခမဲ့ File Unlocker အခမဲ့ Download
Unlocker IObit Unlocker Unlocker ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို ဖယ်ရှားကြသည်မဟုတ်ဖိုင်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အစီအစဉ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အခမဲ့ File Unlocker - သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆို folder ကို access လုပ်နိုင်သည့်မှတဆင့်ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲနဲ့ (ကာကွယ်စောင့်ရှောက်) သော့ဖွင့်ဖို့အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: 4dots Software များ
Size: 13 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: OK NaKah-. ufeff (အောက်တိုဘာလ 2019).